madinika an - davitrisany. Araky ny fanapahan - kevitra nataon ny Vondron ny hainkintana iraisam - pirenena tamin ny 24 Aogositra 2006, dia voasokajy anaty sokajy
heverina fa tany am - piandohan izao rehetra izao. Ny lavaka mainty mielanelan - danja dia manan - danja 100 hatramin ny 10.000 lanjamasoandro. Hainkintana
anômalia elanelany dia 90.37415.. Ny fironany indray dia 6.66731 degre. Hainkintana Zavatra ara - kainkintana : ireo zavatra ara - kainkintana ao amin ny fehiben asiterôida
anômalia elanelany dia 49.60642.. Ny fironany indray dia 17.46985 degre. Hainkintana Zavatra ara - kainkintana : ireo zavatra ara - kainkintana ao amin ny fehiben asiterôida
anômalia elanelany dia 129.82672.. Ny fironany indray dia 9.84460 degre. Hainkintana Zavatra ara - kainkintana : ireo zavatra ara - kainkintana ao amin ny fehiben asiterôida
anômalia elanelany dia 340.05246.. Ny fironany indray dia 3.34863 degre. Hainkintana Zavatra ara - kainkintana : ireo zavatra ara - kainkintana ao amin ny fehiben asiterôida
anômalia elanelany dia 16.81415.. Ny fironany indray dia 10.31543 degre. Hainkintana Zavatra ara - kainkintana : ireo zavatra ara - kainkintana ao amin ny fehiben asiterôida
anômalia elanelany dia 321.72957.. Ny fironany indray dia 8.52781 degre. Hainkintana Zavatra ara - kainkintana : ireo zavatra ara - kainkintana ao amin ny fehiben asiterôida
anômalia elanelany dia 248.77425.. Ny fironany indray dia 4.65736 degre. Hainkintana Zavatra ara - kainkintana : ireo zavatra ara - kainkintana ao amin ny fehiben asiterôida
anômalia elanelany dia 319.93413.. Ny fironany indray dia 3.03910 degre. Hainkintana Zavatra ara - kainkintana : ireo zavatra ara - kainkintana ao amin ny fehiben asiterôida